I-Candle Tin Box Wholesale, uMenzi Wezokupakisha eChina
Imikhiqizo Yebhokisi Lamakhandlela Amakhandlela
Amabhokisi ekhandlela e-Candle ayatholakala kuzo zonke izinhlobo nosayizi. Uma isitsha sekhiphedi lekhandlela sivalwe ngokufanele futhi sivikela nemfudumalo efudumele, khona-ke ngokuqinisekile singasetshenziswa ukwenza ikhandlela le-soy.
Uma uthengisa amakhandlela ezimakethe noma ku-inthanethi, kubalulekile ukukhetha umkhumbi webhokisi lebhokisi lamakhandlela alifunayo.
I-Custom Cutout Metal Round Tin Containers yamakhandlela Ku
Kungani Amakhandlela e-Candle Tin Box ebalulekile?
Uma uthengisa amakhandlela ezimakethe noma online, kubalulekile ukukhetha a ibhokisi lamakhandlela ekhandlela umkhumbi ofuna amaklayenti.
Iziphi izinhlobo zamabhokisi e-Candle tin?
Isitsha setiyidi sekhandlela se-stemless
Ingilazi engenamsindo ye-Oxford ibukeka iyisixaka saluphi uhlobo lomkhiqizo wekhandlela; ziyadingeka futhi zingafanisa ukwakheka kwanoma isiphi isikhala ekhaya.
Ngenkathi ukwakheka kuqondile, ungabheka imvunulo ehlukene, kungaba mhlophe ngokucwebezelayo noma kumnyama matte, okuvezwe kakhulu emibhalweni emisha futhi kuthandwayo.
Ama-Tumbler kanye nezibuko kuyindlela enhle ye-base array, zizwe ukhululekile ukubuka izinhlobonhlobo zethu ze-oxford tumblers kanye nezibuko.
Izimbiza zeglasi zamalambu e-soy ziyindlela eqhubekayo eqhubekayo nethuba labakhiqizi bamakhandlela ukufeza imodeli engafakwanga.
Kubukeka njengokwengezwa okuthandwayo endlini yokugeza noma elondolo njengoba kubukeka njengezitsha zokuhlobisa. Izimbiza ezi-brownish-yellow, ikakhulukazi, sezidume kakhulu kuzo zonke izikhala kufaka phakathi izindlela zokuphila nokuqhuma okusha kanye nokukhuphuka komkhiqizo wokukhanyisa amakhandlela kumasayithi wezindaba zokuxhumana.
Iziqukathi ze-Amber, kanye neziqukathi ezingilazi ezingcacile, kungaba ukukhetha kwami ​​njengodidi oluthembekile lwanoma uluphi uhlobo lomkhiqizo wekhandlela ohlose ukwenza okuthile okuhlukile, ungathenga iziqukathi zethu zekhandlela lwekhandlela lapha.
Izibuko ze-Danube ziyisitsha esidala samakhandlela we-soy, enza amakhandlela amakhulu angaphelelwa isikhathi, kepha amafashini wamakhasimende abonisa ukuthi lokhu kungahle kunciphe ekuthandeni amakhandlela abukeka njenganamuhla.
Zizwe ukhululekile ukubuka izinhlobonhlobo zethu zeDanube kanye nezibuko zedolobha.
Ibhokisi lensimbi lekhandlela
Amathini wamakhandlela e-soy ayindlela eyengeziwe eyandayo ekwenziweni kwamakhandlela. Amathini we-Candlelight ayindlela evelele ezimakethe nase-Etsy; ngokuvamile azibizi kakhulu kunezakwabo ezingilazi, ezizenza ukukhetha okubizayo okungabizi kakhulu kumakhasimende.
Ngenkathi amathani e-aluminium ehlobo zakudala eyindlela ethandwayo, isigqoko esisodwa esivele ngumbhedu namathayi ensimbi alungisiwe.
Lezi zisezingeni eliphakeme futhi zenza ikhandlela elibi kakhulu lezinto zalabo abafuna ukuklama igumbi labo lokuhlala noma ezinye izindawo ezihlukile ekhaya lakho.
Ungabheka kunoma yiluphi uchungechunge lwethu lwamathoni ekhandlela lensimbi ahlukahluka kusuka ku-aluminium kuya kweyethusi, kanye nethusi.